Purba Sandesh	१ आश्विन २०७८, शुक्रबार	121 Views
“टोलीनेताबाट इच्छा भोजनको आदेश आएता पनि त्यहाँ हामीले चाहेका खर्चिला र भड्किला खाद्यवस्तु नै रहेनछन् । ताता फुल्के रोटी र फ्राइड दाल प्रमुख उपलब्ध वस्तु रहेछन् । तिनै खानेकुरा खाएर हामीले आफ्नो यात्रा जारी राख्यौं । आँखाले हेर्ने कुरा आँखैले मात्र हेर्ने हो भनेजस्तै आँखा भरिभरि क्याक्टस् गार्डेनदेखि शुरु भएको दृष्य यात्रा दुर्पिन डाँडा,डेलो पार्क हुँदै म्युजियम पुग्दा आधा दिन ओरालो लागिसकेको थियो ।”
एउटा हठात् निर्णयमा गरिएको यात्रा सबैभन्दा सुन्दर हुन पनि सक्ने रहेछ । यो कोरोना व्याधि अगाडिकै समय थियो । यो बन्दाबन्दी भन्दा अगाडि त यस्ता उल्का यात्रा कमसेकम वर्षमा एकपटक त भइनै रहेका हुन्थे । यस्ता उल्का यात्राका परिकल्पनाकार र प्रायोजक उता काठमाण्डू निवासी भिनाजु डा. गोविन्द हुनुहुन्छ ।
यो यात्रा तिथिमिति बिनाको उद्देश्य बिनाको र अत्यन्त उन्मुक्त पाराको थियो । भित्रभित्रै लुगाफाटाको तयारी गर्ने, के खाने, कताकता जाने भन्ने कुरै यसमा थिएन । यो त अघिल्ला दिन निर्णय गरेर भोलिपल्ट गरिने यात्रा थियो । यात्रा गरेको दुईवर्ष पछाडि कोरोना र बन्दाबन्दीका कारणले घरभित्रै रहनुपरेका अवस्थामा यात्राका तिर्सनाले कालेम्पोङ्ग यात्रा कथाजस्तो बनेर आयो । यस मस्तिष्कले एउटा फिल्टरले जस्तै छानेर उम्दा उम्दा कुरा मात्र संगालेको रहेछ । साना, झिना, मसिना र अल्छिलाग्दा कुरा त बिर्साइदिएछ ।
यता दमकबाट बिहान सखारै नौ सिटे फोर ह्वील गाडि घरकै ६ जना सदस्य टिपेर पूर्वतिर हँुइक्यो । त्यसपछि केही प्राथमिकतामा पर्ने र कुराको भेउ पाउने अन्य केहि बाटाबाटै टिपिंदै गए । परिवारका अत्यन्त प्रिय झण्डै ८० वर्षे रौसे पात्र धुलाबारीमा सडक किनारमा पर्खिरहेका थिए । अनि पुराना कुराहरु बिस्तारै निस्किन थाले । पहाड, ताप्लेजुङ्गदेखि भुटान हुँदै आसाम र भारतका अन्य शहरका कथा आए । पुराना समयका ती ८० वर्षे पात्रका साथीहरु धन्दे, मुस्ले, ओख्ले र टोड्केका बेग्लाबेग्लै कथाहरु आए । अनि उता ढाकर बोकेर फालेलुङ्ग डाँडो काटेर दार्जिलिङ्ग पुग्दा उल्केको मनले पहिलो पल्ट कैंयाँका दोकानमा चाखेको जिलेबीका कथा आए ।
यी गफका मिठासमा भुल्दै हामी सिमाना काटेर एशियन हाइवे पुगिसकेका थियौँ । “अब एक अच्छा चिया जाओस्,” यो एकजनाको प्रकटीत र अरुको अप्रकटीत आशय थियो । “ल भाइ, यो एरियाको सबभन्दा अच्छा चिया दोकानमा रोक्नू । चियाको दोकान एकदमै राम्रो होस् है ।” ड्राइभरले कुरा बुझ्यो, “हुन्छ, हजूर, म गनपाउडर टी पाइने ठाउँमा रोक्छु ।”
अनि यो गनपाउडर टी चाहिं कस्तो हो नि ?, आश्चर्यमिश्रित एक नारी आवाज थियो त्यो । “यो बारुदे चिया हो । यसले मानिसका पेटमा भएका सम्पूर्ण दृष्य अदृष्य कीरा मार्छ ,” यो काल्पनिक स्पष्टिकरण थियो र नयाँ गफको बीजारोपण पनि थियो । गनपाउडर चियाको कुराले पहाडमा कसरी बन्दुकमा बारुद भरिन्थ्यो र पड्काइन्थ्यो भन्ने तथ्यसम्म पु¥यायो । चिया चमेनाले हामीलाई धेरै अल्मल्याएन । फेरि यात्रा टिस्टाका किनार हुँदै बाघे पुल हेर्दै अगाडि बढिरह्यो ।
हाम्रा अग्रजहरुले बाँचेको उदेकको समय विमर्शले बाटाका सुन्दर दृश्यावलोकन सम्म पनि बेलाबेलै ओझेल पाथ्र्यो । उहाँहरुका दुःखद र कष्टकर समय आज सुन्दा हाँसो लाग्ने भएपनि त्यसबेला भयावहपूर्ण हुँदा हुन् । त्यो गरिबीको पराकाष्ठाका समयमा उहाँहरु विद्यार्थी छँदा बनारसमा घटेका दुईवटा घटनाले भने मेरो ध्यान आकृष्ट ग¥यो ।
उपकथा १ः हामी मुश्किलका दिन टारेर पढेका नि । एकदिन कोठामा पकाउने वस्तु थोरै दाल मात्र थियो । मैले दाजुलाई भने– दाजु अलिकति दाल मात्र छ । उहाँ दाल पकाउँदै गर् भनेर बाहिर निस्कनुभयो । दाल पाकिसक्दा उहाँ दौडेर आउनुभयो र छिटो धोती लगाएर हिँडिहाल् भन्नुभयो । म पनि धोती कसेर बाटो लागेँ । खासमा उहाँ एउटा भण्डारामा जानुभएको रहेछ । त्यहाँ एकजना ब्राह्मणको कमी भएछ । अनि त्यतिबेला फोन नभएकाले दौडेर त्यो आफ्नो सिट साथीलाई रोक्न लगाएर डेरामा आएर मलाई लानुभयो । त्यहाँ मजाले खाना पनि खाइयो र पाँच पाँच रुपैँया दक्षिणा पनि पाइयो । त्यो दक्षिणाले महिनाभर पुग्ने रासन ल्याइयो ।
उपकथा २ः बनारसमा हामी उल्का उल्का गथ्र्यौँ । एकजना भोजपुरे साथी थिए । उनलाई मिठाइ साह्रै मन पर्ने तर पैसा नहुने । त्यस्तै एकदिन गफैगफमा एउटा शर्त लगाइयो । ल लंगौटी मात्र लगाएर भीड बजारमा एक फन्को लगाइस् भने अघाइन्जेल जे जे खान्छस् खुवाउने । भोजपुरे ठिटो लंगौटी मात्र लगाएर बजार घुम्न तयार भयो । हामी उसका पछिपछि हिंड्यौं । ऊ त साँच्चै लंगौटीका भरमा बजार घुमेर हलुवाइको दोकान अगाडि आयो र टक्क अडियो । अनि हामीले उसलाई जे जे खान्छ, भरपेट खुवाइदियौँ ।
यी कथाक्रम चल्दाचल्दै हामी कालेम्पोङ्गका साँगुरा गल्लीमा छिरिसकेका थियौँ । साँगुरा बाटा भएको, काठमिश्रित पहाडे घरहरु भएको बजारको एकाछेउबाट हिँडेको हाम्रो बाहन अलि पर्तिर करालो बाटोमा भएको सानो चिटिक्क परेको भोजनालयमा छि¥यो । टोलीनेताबाट इच्छा भोजनको आदेश आएता पनि त्यहाँ हामीले चाहेका खर्चिला र भड्किला खाद्यवस्तु नै रहेनछन् । ताता फुल्के रोटी र फ्राइड दाल प्रमुख उपलब्ध वस्तु रहेछन् । तिनै खानेकुरा खाएर हामीले आफ्नो यात्रा जारी राख्यौं । आँखाले हेर्ने कुरा आँखैले मात्र हेर्ने हो भनेजस्तै आँखा भरिभरि क्याक्टस् गार्डेनदेखि शुरु भएको दृष्य यात्रा दुर्पिन डाँडा, डेलो पार्क हुँदै म्युजियम पुग्दा आधा दिन ओरालो लागिसकेको थियो ।
सबैभन्दा पाका रौसे पात्रतिर हेरेर टोलीनेताको प्रश्न भयो, “के हामी त्यो लेप्चा म्यूजियमतिर जान्छौं त दाइ ?” “होस् होस् । लेप्चाको बारेमा थाहै छ नि ।” “त्यसो भा डिओलो हिलतिर जौं की ?” “पर्दैन हो । ती डाँडामा नाचेरै यो जुनी बितेको छ । कत्ति फेरि त्यतै जानु ।” “लु उसो भा कालेम्पोङ्गको फेमस चीज दोकानतिर जाआंै न त ।” त्यसपछि टोली लार्कमा छिरेर चीजका भेराइटी हेर्दैै, चीज चाख्दै, अलिअलि चीज अनि कालेम्पोङ्गका चिनो खरिद गरेर आर्ट क्याफेको चियाले बिट मार्दै वाहन चढ्दा तीन बजिसकेको थियो । “आँखाले हेर्ने आँखैले हेर्नु । शब्द खेर नफाल्नु,” रौसे पात्रले अर्ति दिए । मलाई पनि हो जस्तो लागेर आयो ।
“अनि त्यो थ्री डी सिनेमा कस्तो लाग्यो त दाजु ?,” म्यूजियममा देखाइएको छोटो थ्री डी सिनेमा रोचक थियो । पहिलो पटक थ्री डी हेर्नेलाई त उल्कै भएको र सिनेमाका पर्दाबाट पात्र निस्केर आफ्ना आँखै घोच्न खोजेको दृष्यले चाहिँ सबैलाई रोमाञ्चित तुल्याएछ । कालेम्पोङ्ग चिर्लिप्पै घुमिसकिएको कुरा गाडीमा निस्कियो । अनि तल टिस्टा बजारमा झरेर चिया पिउने र हुँइकिने टोलीनेताको अन्तिम निर्णय आयो । टिस्टा तीरको चिया र अलेली उपलब्ध खाजा खाँदै गर्दा हो, एकजना सज्जन जस्तो देखिने गफाडी भेट भएको । एकैछिनमा उसले पश्चिम बंगालको राजनीतिदेखि सुन्न लायकका ठाउँहरुको बढो मीठो ढंगले विवरण दियो । “तपाईँहरु मोर्गेन हाउस जानुभएनछ, होगि ? आर्कोपल्ट आउनू, म लगिदिन्छु । त्यहाँ त टप टप मन्छे बस्छ नि । नाइन्टिन थर्टीमा ब्रिटिस मोर्गेन दम्पतीले बनाको । आइले गोर्मेन्टले लज बनाको छ । तपाईहरुको साथ लागेर जान पाए एक्टरहरु बस्ने मोर्गेन हाउसमा एक घण्टा मात्र बस्दा पनि मज्जा आउँथ्यो होला । ल मेरो बारेमा सोध्नू, अर्कोपल्ट आउँदा म गाइड पक्का ल,” भनेर उसले बिदा लियो । दिनभरी थाकेर लथचूर्ण यात्रुहरु एकैचोटी पानीटंकी छेउको जाममा मात्र ब्युँझिए । त्यसको झण्डै एक घण्टापछि मात्र मुश्किलले जाम छिचोलेर काँकडभिट्टा टेकियो होला । चौधघण्टा पछि एक भारी कालेम्पोङ्गका सम्झना बोकेर हामी दमकमै बास बस्न आइपुग्यौं ।
Purba Sandesh १८ आश्विन २०७८, सोमबार
मुस्कान, कविता र नब्बेका घाउहरू